“Lionel Messi waa dagaalyahan bahal ah, wuxuuna neceb yahay guuldarada” – Pep Guardiola – Gool FM
“Lionel Messi waa dagaalyahan bahal ah, wuxuuna neceb yahay guuldarada” – Pep Guardiola
(Barcelona) 15 Okt 2018. Macalinka reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya uu bixiyay wuxuu kaga hadlay asraar badan ee ku waayihiisii tababarka ee kooxda Barcelona.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu daaha ka qaatay wareysigii uu bixiyay Pep Guardiola, waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa xidiga reer Argantina ee Lionel Messi.
“Lionel Messi waa ciyaaryahan aad u qaali ah ee aad u wanaagsan, waa xidig bahal ah ee si adag u dagaalama, wuxuuna saaxiibadiis kooxda Barcelona ka caawiyaa inay u ciyaaraan si wanaagsan, isla markaana ay soo bandhigaan wax walba ee awoodooda gaarsiisan tahay, sababa la xiriira kooxda iyo Jamaahiirta dartood”.
“Haa, wuxuu necebyahay inuu guuldareysto, daawado isaga oo ciyaaraya, wuxuu u ciyaaraa sida nin da ‘yar ah”.
Si kastaba tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola ayaa waxay kasoo wada shaqeeyeen Lionel Messi jiilkii dahabiga ahaa ee kooxda Barcelona inta u dhexeesay 2009-2012, waxayna si wada jir ah u soo gaareen guulo muhiim ee taariikhi ah.
Ramsey oo MATAANAYAAL jidka ugu soo jira dartood isaga reebay......